अमेरिकी ब्ल्याक हक हेलिकप्टर उडाउँदै तालिबानले त्यहीँ झुन्ड्यायो मान्छे! - Dainik Online Dainik Online
अमेरिकी ब्ल्याक हक हेलिकप्टर उडाउँदै तालिबानले त्यहीँ झुन्ड्यायो मान्छे!
प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७८, शनिबार ११ : २१
अमेरिकी सेनाले पूर्ण रुपमा अफगानिस्तान छाड्न अगाडि अगष्ट ३० मा एउटा भिडिओ निकै भाइरल भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमका अनुसार अफगानिस्तानको कान्दहारमा अमेरिकी ब्ल्याक हक हेलिकप्टर उडाउँदै तालिबानले एक व्यक्तिलाई त्यहीँ उडिरहेको हेलिकप्टरमा झुन्ड्याएर एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको छ।
हाल अमेरिका र बेलायती सेनलाई अनुवादकको रुपमा काम गर्ने मानिसलाई तालिबानले खोजी–खोजी मारिरहेको हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको थियो। यसबीचमा तालिबानले क्रुर ढंगबाट हत्या गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ जसले मानवअधिकारको धज्जी उडाएको छ।
यसअघि तालिबानले कसैको हत्या नगर्ने र अमेरिका तथा बेलायती सेनाका सहयोगी सबैलाई माफी दिने बताएको थियो। यद्यपी तालिबानले वाचा विपरित आफूहरुलाई खोजेर सजाय दिन थालेको काबुलमा लुकिरहेको अनुवादकहरुले बीबीसी तथा सीएनएनजस्ता संचारमाध्यमलाई बताइरहेका छन्।
केही बेलायती सेनालाई सहयोग गर्ने अफगान नागरिकले आफूहरुलाई बेलायतले ठगेको अनुभव भइरहेको बताएका छन्। हाल आफूहरु लुकीलुकी भोकभोकै बसिरहेको उनीहरुले बीबीसीसँग बताएका छन्। उनीहरुले आफ्नो उद्धार हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
तालिबानको आगमनसँगै क्रुर शासन व्यवस्था लागू हुने आशंकाकाबीच हेलिकप्टरमा मान्छे झुन्ड्याउने कार्यले त्यहाँ त्रास फैलिएको छ।